PHEZULU KAKHULU ethandwa kakhulu ISITSHAYINA DATING APPS ngu-Mandarin
Bonke Isitshayina Dating Apps, uninzi ethandwa kakhulu omnye ngu-Tanta.
Oko nkqu ikhangeleka ngathi Tinder. Abasebenzisi unako ngesandla zalisa zabo inkangeleko inkcazelo kwaye umdla njengoko kungekho automated ingqokelela ka-umsebenzisi data indlela Facebook imisebenzi. Kanye esayiniweyo phezulu, unako ukuqalisa ukusebenzisa i-app. Emva koko uza kuba zaziswe kunye umntu s photo kwaye inkangeleko kwaye swipe ekhohlo okanye ekunene khetha lo mntu okanye aphelise kuye yakhe. Uyakwazi qalisa incoko kunye loo mntu ukuba bobabini ukhetha ngamnye enye. Baninzi young kwaye engaselunxwemeni abantu usebenzisa Tanta, apho ubani pretty enkulu igama lomsebenzisi kwaye kulula ukuyisebenzisa. Nangona kunjalo, kukho kuphela ezimbalwa real iincoko neentlanganiso kuthelekiswa inani imifanekiso. Kwi end, ke zonke phezulu kuwe kwaye yakho thelekisa nokuba ngaba uthathe le onesiphumo umhla inyaniso. Emva phezulu ke ayisosine nje booty-call app simemo kwakhona. Ungasebenzisa oku ukufumana umntu othe efanayo umdla njengoko kufuneka. Momo waba kakhulu kuqala dating app ukuba sijongana wonke Eliphakathi Ubukumkani. Kwaba widely ebone njengoko eyona usetyenziso booty-ubizo ixesha elithile. Ukuze ufumane uid le engalunganga reputation, Momo itshintshe ngokwayo ukusuka dating-focused app ukuba yenzala esekelwe loluntu malunga omnye. Ekubeni lokuqala kwaye wemiceli-dating app, abantu kwakhona cinga lento ethile app xa oko iza discovering abantu abatsha. Nangona kunjalo, i-app ayingomsebenzi enye ukusebenzisa ngenxa yayo numerous yongeza-ngomhla we-mpawu ezo basenokuba confusing. Unga fumana entsha abahlobo kwindawo yakho (ngaphakathi ethile ilayini esuka embindini), ukudlala umyalelo-imidlalo okanye ukungena umsebenzisi-generated amaqela. Momo ingaba i-kujike phezulu inani langaphandle abasebenzisi, oko kuthetha ukuba unga sebenzisa olu setyenziso ngeendlela ezininzi ezahluka-hlukileyo amazwe mbombo zone zeli hlabathi. Phezulu yakho umdlalo kunye exabisekileyo Isitshayina iintlobo, efumaneka kwi-intanethi, Beirut okanye i-shanghai. Kunyaka nje iiveki uyakwazi mfundisi Survival Isitshayina kwaye ukuzithwala ezisisiseko iincoko kunye Isitshayina abantu. Kule app, ngesiqhelo abantu kufuneka propose a sangokuhlwa umhla kwaye ulinde abafazi ukuba sayina kuba sangokuhlwa. Banako ke khetha apho umfazi ukuthatha kwi-sangokuhlwa. Nangona kunjalo, ayo s wokuba kujike ethandwa kakhulu kuba abafazi ukunikela a sangokuhlwa umhla kakhulu. Layo s enkulu, indlela ukwakha entsha budlelwane nabanye njengoko unga impress yakho umhla kunye yakho ukhetho sangokuhlwa venue kwaye get ukwazi ngamnye enye ngexesha enjoying a mnandi meal. Phezulu yakho umdlalo kunye exabisekileyo Isitshayina iintlobo, efumaneka kwi-intanethi, Beirut okanye i-shanghai. Kunyaka nje iiveki uyakwazi mfundisi Survival Isitshayina kwaye ukuzithwala ezisisiseko iincoko kunye Isitshayina abantu. Motto sesinye ngakumbi eyodwa Isitshayina dating apps.
Heartbeat ufumana i-app made kuba college abafundi
Bonke abasebenzisi kufuneka ufake institutional credentials ukuze ukwazi ukusebenzisa i-app. Oku engqongqo kakhulu icoca inkqubo ibonisa Jindong s determination ukuquka i kakhulu best of young kwaye educated abantu.
Jindong ayinguwo-mveliso dating app
Njengoko abo kukunika ii-intshi ezimbini ngosuku, ugcina a nihamba inyathelo nje oko kusenokuba elungileyo okanye engalunganga, kuxhomekeke yintoni nisolko ikhangela. Ngendlela efanayo ukuba Tanta imisebenzi, Jintao yenza ukuba ahlangane phezulu kunye abantu. Basebenzisi kanjalo kufuneka ngesandla faka zabo zabucala kunye umdla. Nangona kunjalo, ayo engundoqo umahluko ukusuka Tanta kukuba oko sele i-yoqobo ujongano lomsebenzisi uyilo endaweni literally ukukopa Tinder s uyilo, kwaye le app akubonakali t kuba njengoko abaninzi imisebenzi njengoko Tanta ezifana umgama – okanye ubudala esekelwe amacebo. Kukho kanjalo abangaphantsi inzala iinketho kwaye ngaphantsi abasebenzisi kule app. Apho kufuneka oko, aba ngabo engundoqo Isitshayina Dating Apps asetyenziswa mainland China namhlanje. Ukuba unengxaki uxakekile umsebenzi shedyuli kunye hayi kakhulu ixesha kuba intlanganiso entsha abantu, kufuneka uzame amanye ezi Isitshayina Dating Apps kwaye bona njani abo umsebenzi